April 2019 - ThutaStar
April 30, 2019 Thuta Star 0
“မင်​မဲ့စရိုက်​ဆန်​စွာ အနိူင့်​အထက်​ပြုကျင့်၍အုပ်​စုဖွဲ့လူသတ်​မှု့ကျူးလွန်​သူများအား ဥပ​ဒေနှင့်​အညီ အ​ရေးယူ​ဆောင်​ရွက်​​ပေးပါရန်​” ကျွန်​​တော်​၏သား​ ​မောင်​​အေးချမ်း​ကျော်​သည်​ အသက်​(၁၅)နှစ်​သာရှိ​သေးပြီး တက္ကသိုလ်​ဝင်​တန်းစာ​မေးပွဲ​ဖြေဆိုထားသူလည်းဖြစ်​ပါသည်​။ တရားသူကြီး ၊ ဥပ​ဒေအရာရှိ ၊ မူးယစ်​ ဒုရဲအုပ်​ ၊ အ​ထွေ​ထွေအုပ်​ချုပ်​​ရေး ဒုဦးစီး ရာထူးများအတွက်​ ရည်​မှန်းထားသူလည်းဖြစ်​ပါသည်​။ ၅.၄.၂၀၁၉ ည၁၁း၃၀ခန့်​အချိန်​တွင်​ မန္တ​လေးမြို့၊ချမ်းမြသာစည်​မြို့နယ်​ ၊ မြို့သစ်​(၄) ၆၅လမ်းနှင့်​​အောင်​မင်္ဂလာလမ်း​ဒေါင့်​ […]
တောင်ကြီးမြို့၊ ကန်သာရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ (၁၄)၊ မင်္ဂလာလမ်း ၊ အိမ်အမှတ် (၁၁၈) ရှိ မြင်းဖြူနှစ်ကောင်ဆေးတိုက်နေအိမ်တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၈)ရက်နေ့ နံနက် ၀၂:၀၀ အချိန်ခန့် ၌ အမည်မသိလူသတ်သမား၏ ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည့်အတွက် …. လူမမယ်အရွယ် မောင်စိုင်းဖဖ (၇) လသား […]
မြမြ၀င်ပူးခံရသူ မဇာခြည်လွင် နဲ့ မဝေဇင်ထွန်း တို့ ပြောပြီ ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ ကျောက်စိမ်းစက်ရုံတာဝန်ရှိသူများ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ မှာ မြမြ၀င်ပူးခံရသူ မဇာခြည်လွင် နဲ့ မဝေဇင်ထွန်း တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်များကို ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ “ညီမကိုလည်း လုပ်ကြံပြီးလုပ်တယ်ပြောတယ်၊ ညီမကိုယ်ချင်းစားလို့ ကူညီတာပါ၊ ညီမကို ရူးတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်၊ အခုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရှိတယ်ပြောလို့လာတာပါ၊မြမြဆိုတာကို ညီမလည်း […]
လူငါးဦး မိုးကြိုးပစ်ခံရ၊ နှစ်ဦးသေဆုံး ရောင်းမော်ကျေးရွာတွင် လူငါးဦး မိုးကြိုးပစ်ခံရ၊ နှစ်ဦးသေဆုံး ထားဝယ်မြို့နယ် ရောင်းမော်ကျေးရွာတွင် ဧပြီလ ၃၀ ရက် နေ့လယ် ၃ နာရီခန့်က က လူငါးဦး မိုးကြိုးပစ်ခံခဲ့ရပြီး နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း ရောင်းမော်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှ သိရသည်။ ထားဝယ်မြို့နယ်၊ ရောင်းမော်ကျေးရွာတွင် ညနေ ၃ […]
အခုတလော ပရိသတ်တွေကြားမှာရေးပန်းစားနေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ ပိုပိုရဲ့သိန်းငါးထောင်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အိမ်ကြီးအကြောင်းပါ။ အဲဒီအိမ်ကြီးကိုဆောက်တဲ့ ပိုက်ဆံတွေကိုဘယ်လိုများ ရှာထားသလဲဆိုတာကိုလည်း ပရိသတ်တော်တော်များများကသိချင်ကြပါတယ်။ သူကသူရဲ့အိမ်အကြောင်းနဲ့ ဒီပိုက်ဆုံတွေကိုဘယ်လိုစုထားတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကို Myanmar Celebrity နဲ့ Cele ရပ်ကွက် တို့ရဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာပြောပြသွားတာတွေရှိပါတယ်။ သူပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းတွေကို ပြောချင်လွန်းလို့ မိတ်ဆွေတွေသိအောင်ပြန်ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ပိုက်ဆံ သိန်း၅၀၀၀ကို ဘယ်လိုရှာခဲ့လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကို “ […]
ကိုယ့်ချစ်သူကို အရမ်းချစ်မိသွားတဲ့အခါ လုပ်မိတတ်တဲ့ အရာ (၄) မျိုး
ကိုယ့်ချစ်သူကို အရမ်းချစ်မိသွားတဲ့အခါ လုပ်မိတတ်တဲ့ အရာ (၄) မျိုး တချို့သူတွေက အချစ်ကြီးလွန်းတတ် ကြပါတယ် ။ ဒါက တခါတရံတော့ အဆင်ပြေပေမယ့် အမြဲတမ်း ဆိုရင် တဘက်လူက နားလည်မပေးနိုင်တဲ့ အခါ လမ်းခွဲတဲ့အထိ ဖြစ်စေနိုင် ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ အချစ်ကြီးသူ တွေက […]
မြမြဝိဥာဉ်ဝင်ပူးခံရသည့် စက်ရုံအလုပ်သမနှစ်ဦးအား ထပ်မံဝင်ပူးခံရပါက အရေးယူမည် ဟု စက်ရုံတာဝန်ရှိသူ ပြော ဧပြီ ၃၀ သော်လင်းထက် /ဝေယံ ကျောက်စိမ်းဖိနပ်စက်ရုံမှ အလုပ်သမနှစ်ဦးထံသို့ မြမြဆိုသည့် ၀ိဥာဉ်မှဝင်ပူးကာ အဓမ္မပြုကျင့်သတ်ဖြတ်ခံရ ကြောင်း ပြောကြားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ၄င်းမြမြဆိုသူမှာ ကျောက်စိမ်းဖိနပ်စက်ရုံတွင်မရှိသည့်အတွက် ယင်းအလုပ်သမနှစ်ဦးအနေဖြင့် ၀ိဥည်ဝင်ပူးခြင်းဖြစ်စဉ် ထပ်မံဖြစ်ပေါ်ပါက အလုပ်ရှင်၊အလုပ်သမားစာ ချုပ်(EC)အရ […]
၄ လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုမှ သေဆုံးသူများ၏ နောက်ဆုံးခရီး
၄ လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုမှ သေဆုံးသူများ၏ နောက်ဆုံးခရီး ၄ လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုမှ သေဆုံးသူများ၏ ရုပ်အလောင်းများအား တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ သုဿာန်သို့ ပို့ဆောင်မီးသဂြိုဟ် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးမြို့တွင် ဧပြီလ ၂၈ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော အသက် ၇ လအရွယ် ကလေးငယ် တစ်ဦး အပါအဝင် ၄ လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုမှ […]
မမြဝိညာဉ်ပူးကပ်မှု ကျောက်စိမ်းစက်ရုံတာဝန်ရှိသူများ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ် . .စာရင်းဇယားတွေရှိချက်များ နယ်မြေကွင်ဆင်းလေ့လာမှုများ ဗီဒီယိုဖိုင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ လူမှုကွန်ယက်မှာပျံ့နှံ့နေတဲ့ဝိညာဉ်ဝင်ရောက်ပူးကပ်ပြောဆို မှုမှာ မှန်ကန်မှုမရှိသလို ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းလည်းမရှိကြောင်း ကျောက်စိမ်းစက်ရုံHR မန်နေဂျာကို ဇော်ဇော်အောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မြမြဝိညာဉ်ဝင်ရောက်ပူးကပ်မှုဖြစ်စဉ်များနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းမှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးပြောဆိုလိုက်တာပါ။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဝိညာဉ်ဝင်ရောက်ပူးကပ်ခံရသူမဇာခြည် လာရောက်ခဲ့ပြီး မီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်မှုကိုယခုလိုဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ The Silent Talks Unicode […]